Mika 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Nyaya yevaIsraeri kuna Mwari (1-5)
Jehovha anodei? (6-8)
Kururama, kuvimbika, kuva nemwero (8)
Mhosva yevaIsraeri nekurangwa kwavo (9-16)
6 Ndapota, inzwai zviri kutaurwa naJehovha. Simukai mutaure nyaya yenyu pamberi pemakomo,Uye zvikomo ngazvinzwe inzwi renyu.+ 2 Imi makomo inzwai nyaya ina Jehovha,Imi nheyo dzakasimba dzenyika,+Nekuti Jehovha ane nyaya yaari kuda kutonga vanhu vake;Achatongesa vaIsraeri achiti:+ 3 “Imi vanhu vangu, ndakaitei kwamuri? Ndakakunetesai sei?+ Taurai zvandakaita. 4 Nekuti ini ndakakubudisai munyika yeIjipiti,+Ndakakununurai muimba yeuranda;+Ndakatuma Mozisi, naAroni, naMiriyemu kwamuri.+ 5 Ndapota, imi vanhu vangu, yeukai zvakarongwa naMambo Bharaki weMoabhi,+Uye zvaakapindurwa naBharami mwanakomana waBheori,+Zviya zvakaitika kubva paShitimu+ kusvika kuGirigari,+Kuti muzive mabasa akarurama aJehovha.” 6 Ndichauya pamberi paJehovha nechii? Ndichapfugamira Mwari ari kumusoro nechii? Ndichauya pamberi pake nezvibayiro zvinopiswa here? Ndichauya nemhuru dzine gore rimwe chete here?+ 7 Ko Jehovha angafadzwa nemakondohwe ane zviuru,Nehova dzemafuta dzinosvika makumi ezviuru here?+ Ndingapa mwanakomana wangu wedangwe kuti ndivhare kupanduka kwangu here,Iye mwana wangu wandakabereka, kuti ndivhare kukanganisa kwangu here?+ 8 Mwari akakuudza kuti zvakanaka ndezvipi, iwe munhu. Jehovha anoda kuti uitei?* Chaanongoda ndechekuti uite zvakarurama,+ ukoshese kuvimbika,*+Uye kuti uve nemwero+ pakufamba naMwari wako!+ 9 Inzwi raJehovha rinoshevedzera kune vari muguta;Vaya vanoratidza kuti vane uchenjeri* vachatya zita renyu. Inzwai kurira kweshamhu muteerere iye akaituma.+ 10 Muimba yemunhu akaipa muchiine pfuma yezvakaipa here? Muchine efa* inonyangadza yakatapudzwa here? 11 Ndingava munhu akachena* ini ndiine chikero chakaipa hereUye ndiine homwe yematombo ekuyeresa ekubiridzira vanhu?+ 12 Nekuti vapfumi varo vanongoita zvemhirizhonga,Vagari varo vanotaura nhema;+Uye rurimi rwavo runonyengera.+ 13 “Iniwo ndichakurova ndokusiya uine ronda,+Ndoita kuti usare usina chinhu nemhaka yezvivi zvako. 14 Uchadya asi hauzoguti;Mudumbu mako muchange musina chinhu.+ Uchatadza kuchengetedza zvaunenge watora,Uye ndichaita kuti zvaunenge waenda nazvo zviparadzwe nebakatwa. 15 Uchadyara mbeu, asi hauzokohwi. Uchatsika-tsika maorivhi, asi hauzoshandisi mafuta acho;Uchatsika-tsika mazambiringa kuti uwane waini itsva, asi hauzonwi waini yacho.+ 16 Nekuti munoteerera mirau yaOmri muchitevera mabasa ese eimba yaAhabhi+Uye munotevera mazano avo. Ndokusaka ndichaita kuti muve chinhu chinotyisaUye kuti vagari vemuguta racho vave chinhu chinoridzisa muridzo;+Muchashorwa nemarudzi.”+
^ Kana kuti “umuitirewo chii?”
^ Kana kuti “uve nemutsa uye kuti urambe uine rudo.” ChiHeb., “ude rudo rusingachinji.”
^ Kana kuti “uchenjeri hunobatsira.”
^ Kana kuti “asina mhosva.”